Tilmaamaha MACD Qeybta 1: fikradaha aasaasiga ah iyo noocyada kaladuwan ee fasalka. | vfxAlert official blog
Tilmaamaha MACD Qeybta 1: fikradaha aasaasiga ah iyo noocyada kaladuwan ee fasalka.
Raadinta istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo had iyo jeer iyo meelwalba u shaqeysa, dadka bilowga ahi sida caadiga ah waxay u maraan wadada isku murginta habka falanqaynta suuqa, iyo istiraatiijiyado leh tobanaan tilmaamayaal oo inta badan is khilaafsan
Dhanka kale, ganacsatada khibradda u leh waxay ogyihiin in waxa ugufiican oo dhan horeyba loo hindisay waxayna si joogta ah u siisaa natiijooyin faa'iido leh hanti kasta. Isla mar ahaantaana, shuruudaha furitaanka heshiisyadu waa sahlan yihiin waxayna ku saleysan yihiin qodobbada ugu muhiimsan ee dhaqdhaqaaqa suuqa, oo aan isbeddelin in ka badan boqol sano. Mid ka mid ah qalabkan caalamiga ah ayaa ah tilmaame MACD.
Sida aaladaha kale ee falanqaynta farsamada aasaasiga ah, Tilmaamaha Isuduwaha Dhaqdhaqaaqa / Kala-Bixinta (MACD) waxaa sameeyay Gerald Appel si looga ganacsado suuqa wax kala iibsiga, halkaas oo xilligaas ay ka jirtay isbeddello dhexdhexaad ah iyo isbeddello muddo dheer soconaya oo ku saabsan inta badan hantida.
Suuqa Forex waa mid xamaasad badan oo mala awaal ah, laakiin halkan tilmaamuhu wuxuu u shaqeeyaa sidii lagu daray, ka sokow, qeexida labada lamaane ayaa noo ogolaatay inaan ogaanno noocyada cusub ee calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee aan ku jirin sharaxaadda aasaasiga ah. Algorithm-ka xisaabinta isu-geynta / kala-duwanaanta isku celceliska celceliska ayaa suurta gal ka dhigaya in si deg deg ah loo qiimeeyo jihada iyo xoogga isbeddelka hadda socda, iyo sidoo kale in la arko dhibco dib-u-noqosho suurtagal ah waqtiga. Awoodda loo leeyahay in lagu falanqeeyo soojiidashada qiimaha, aaladda waxaa iska leh aaladda isku-darka "isbeddellada + oscillator".
Jahwareerkani wuxuu ku jiraa suugaanta iyo sharaxaadda istiraatiijiyadda, markaa ka hor intaan la adeegsan tilmaamaha MACD, waxaan u baahan nahay inaan caddeynno in ugu horreyntii, waxaan la macaamleynaa fasiraad muuqaal ah oo ku saabsan isgoysyada iyo isdhexgalka labada jibbaar (EMA) celceliska dhaqdhaqaaqa.
Halbeegyada iyo algorithm xisaabinta
Tilmaamuhu wuxuu ka mid yahay aasaasiga aasaasiga ah ee qalabka falanqaynta farsamada ee dhammaan meheradaha ganacsiga binary ee caanka ah . Sida caadiga ah, waxaa lagu soo bandhigaa daaqad gooni ah; waxaa jira ikhtiyaarro leh meelaynta shaxda qiimaha.
Dejinta tilmaame MACD waxay ka kooban tahay saddex, nooca aasaasiga ah ee jibbaaranaha, celceliska dhaqdhaqaaqa iyo doorashada nooca qiimaha lagu qiyaasay (qiimaha caadiga ah ee dhow). Tani waxay hubineysaa in suuqa "buuqa" si wax ku ool ah loo nadiifiyo, waana adag tahay in la go'aamiyo jihada dhabta ah ee isbeddelka hadda socda.
Hoosudhaca jilicsanaanta ayaa ah daahitaan kordhay suuqa hadda jira. Waqtiyada udhaxeeya H1 iyo wixii ka sareeya, saameyn weyn kuma lahan natiijada ugu dambeysa, laakiin kuwa yar yar, iyo xitaa marka xoqdo, waxay u horseedi kartaa khasaaro weyn.
Natiijo ahaan, waxaan helnaa xariijin "dhakhso ah", oo ku saleysan taas oo taariikh-dhaqameedka tilmaamuhu markaa la dhisayo. Ka dib markii la nadiifiyo iyadoo la adeegsanayo habka celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa (SMA), waxaan heleynaa xariijin "gaabis ah" (muddadaas oo si gooni ah loo dejiyay), taas oo isbeddelada qiimaha aan kala sooca lahayn ay gebi ahaanba maqan yihiin.
Ganacsato badan oo saamileyaal ah iyo falanqeeyayaal ayaa sii wadaya adeegsiga tilmaamaha nooca aasaasiga ah ee labada sadar iyadoo laga furayo barta isgoyskooda.
Ogeysiis muhiim ah : dad yar ayaa og in qoraagu tixgeliyey xilliyadii caadiga ahaa (12, 26, 9), oo ku habboon oo keliya iibsiyada, istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo iib ah ayaa noqon doonta mid lagu kalsoonaan karo (8,17,5).
Way ka fiicnaan kartaa xaalad gaar ah iyo labada lamaane inay si fiican u shaqeeyaan, laakiin waxaa aad loogu talinayaa in la beddelo dhammaan xuduudaha isla waqtigaas. Haddii kale, waxaan geli karnaa xaalad caqligalka tilmaamuhu jebi doono, halkii aan ka heli lahayn falanqaynta saxda ah, waxaan heli doonnaa buug "ku habboon" natiijooyinkii hore oo aan shaqo ku lahayn suuqa hadda jira.
Habka aasaasiga ah ee falanqaynta suuqa iyadoo la adeegsanayo MACD
Sharciga ugu horeeya: helitaanka histogaraam ka sarreeya heerarka eber wuxuu tilmaamayaa in celceliska degdegga ah ee tilmaame uu ka sarreeyo midka gaabiska ah, taas oo macnaheedu yahay inay jirto kor u kac. Marka soonka MA uu ka hooseeyo midka HAL gaabiska ah, histogaraamku wuxuu ka hooseeyaa xariiqyada eber-ka waxaana hoos u socda dhaqdhaqaaqa qiimaha.
Xusuusnow in histogaraamku u taagan yahay farqiga u dhexeeya qiimaha buuxa ee MACD iyo khadka calaamadaha EMA (9). Sidaa darteed, astaamaha ayaa ka horeeya xariiqa signalada waxayna magdhabayaan iskaanka daahitaanka lama huraanka ah ee Celceliska Dhaqdhaqaaqa.
Haddi histogaraam ka koreeya / ka hooseeya eber ay muujineyso isbeddel oo aad isku dayi karto inaad furto boosas dheeri ah ama aad ku darto mugga xulashooyinka ikhtiyaariga ah ee hadda jira oo leh xaqiijin dheeri ah, ka dibna isgoyskiisu, sida ay tahay celceliska celceliska shaxanka, waxay noqon doontaa calaamadda dib u noqoshada oo waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso Faa'iidada / Khasaaraha hadda jira.
Kalsoonida astaamaha ayaa sii kordheysa haddii histogaraam cusub oo ugu sarreeya iibka iyo ugu yaraan iibsiga la sameeyo marka lagu daro isgoyska. Way ka fiican tahay in la isticmaalo tilmaame MACD oo wax laga beddelay iyo meelaha xumbada / hoos u dhacaya, oo lagu muujin karo midabbo shaqsiyeed - markaa isbeddelka jihada ayaa ka sii badnaan doona.
Ugu badnaan cusub ee histogaraamku wuxuu muujin karaa muuqaalka culeys la mid ah shaxda qiimaha, taas oo noqon karta taageero / iska caabin weyn. Haddii muuqaalka kore ee ugu sarreeyaa uu ku soo dhowaado soo dhowaanshaha qiimaha heer hore u jiray oo muhiim ah waxyar ka dib wuu kala jabi karaa / soo kaban karaa xaaladduna waxay u baahan tahay fiiro gaar ah. Si la mid ah, waxaan uga falcelineynaa muuqaalka ugu yar ee cusub.
Marka uu jiro dhaqdhaqaaq dhinaca dambe oo cad ah, xoogga calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ayaa si aad ah hoos ugu dhacaya inta badanna been bay noqdeen. Xaaladda guri ballaadhan, gaar ahaan waqtiyada hore, dib u soo celinta ka soo baxda max / min cusub ayaa ka sii badan burburka. Xaqiiqadan waxaa loo isticmaali karaa inay tahay calaamadda xaqiijinta ee ganacsiga lulaya. Iyadoo la raacayo, xaqiijinta burburka waxay muujineysaa bilowga isbeddel cusub oo xoog leh.
Xagasha xagjirnimada iyo jihada aaladda histogaraam ayaa u oggolaanaysa, marka lagu daro isu dheellitirka xoogagga dibiyada / orso, si loo qiimeeyo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa qiimaha. Kordhinta jiirada kore waxay muujineysaa kororka saameynta iibsadayaasha ama, sida ay yiraahdaan jawiga ganacsiga, "suuqa wuu sii xoogeystaa" iyo "wuu daciifaa" marka xagalka hoos u sii weynaado.
Isbedelka jihada wuxuu muujinayaa daciifinta isbedelka socda. Tusaale ahaan, haddii qiimaha uu sii kordhayo, oo histogaraamku muujinayo hoos u dhac tartiib tartiib ah baararka, jagooyinka dheeraadka ah ee la iibsado ha furin. Waxaan raadineynaa calaamadaha ugu horreeya ee bilowga iibka waxaana laga yaabaa inaan hagaajino faa'iidada / luminta hadda jirta.
Kaladuwanaanta oo ah calaamadda tilmaanta ugu weyn
Kaladuwanaanshaha dhaqdhaqaaqa qiimaha iyo tilmaamayaasha farsamo waxay ku saleysan tahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee beddelaya wareegyada suuqa - uruurinta / qaybinta. Isu-dheellitirka awoodda udhaxeysa iibsadayaasha / iibiyaha ayaa si tartiib tartiib ah isu beddelaya, in muddo ahna suuqa ayaa kusii soconaya dhaqdhaqaaq la’aan, in kasta oo qadarka lagama maarmaanka ah ee xiisaha furan ee jihada ka soo horjeedda la ururiyey.
In kasta oo xaqiiqda ah in MACD aysan ka tirsanayn "run" oscillators, xeeladaha ikhtiyaariga ah waxay u arkaan is-khilaafsanaanta nooca istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah , xitaa kuwa ugu yar.
Kala-baxa ayaa ah dhaqdhaqaaqa ka soo horjeedka shaxda qiimaha laga soo bilaabo heerarka eber ee histogaraam; Xaaladda ka soo horjeedda waxaa loo yaqaan isku-xirnaanta waxaana sidoo kale lagu kasban karaa faa'iido.
Falanqaynta iyadoo la adeegsanayo MACD waxay u kala qaybisaa laba qaybood oo waaweyn:
Kaladuwanaanta Sare / Hoosyada . Jihada dhaqdhaqaaqa waa inay ku jirtaa ugu yaraan 2-3 xagjir maxalli ah xilliyada toddobaadlaha ama billaha ah, sidaa darteed, khilaafaadyada noocan oo kale ah ayaa sida ugu fiican loogu raadiyaa waqtiga toddobaadlaha ah (D1);
Kaladuwanaansho . Waxay ku dhacdaa waqtiyo yar-yar M5-M30 oo ah dhaqdhaqaaq isdaba-joog ah oo ka socda jaantuska qiimaha leh "dips" yar oo histogaraam ah. Kala-baxa muddada-gaaban ee beenta ah ayaa sidoo kale la oggol yahay, laakiin guud ahaan, waxaad u baahan tahay inaad si gaar ah uga taxaddarto Xitaa haddii ay sax yihiin khilaafaadyadu waa kuwo yar yar oo dhaqso u dhow, waxaa laga yaabaa inaanay u qalmin halista.
Qaybta labaad , akhri sida lacag loogu sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah iyadoo la adeegsanayo MACD qalabyada kale ee falanqaynta farsamada.